Xa kuziwa kwimizamo yokunceda kunye neminyhadala, ii-marathons zezona zikhetho ziphambili. Umdyarho weembaleki uvumela iimbaleki ukuba zibonise amandla, amandla kunye nokuzibophelela kuthando lwabo okanye umxhasi ozikhethelayo ngeemveliso zemarathon zesiko. Akukho nto ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuba ungumhambi oselunxwemeni osebenzayo, isurfer okanye usana lwamanzi, kunokwenzeka ukuba ukhalaze ngokuba kufuneka uthambise i-sunscreen ngalo lonke ixesha ujika. Emva kwayo yonke loo nto, kuyacetyiswa ukuba uphinde ufake isikrini selanga rhoqo emva kweeyure ezimbini okanye-ngakumbi ukuba uyashenxisa, swimmi ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni ihempe yetriblend ishushu kakhulu? Xa umthengi wam efuna ingcebiso ngokukhetha izinto zokwenza ihempe eqhelekileyo, ndiqinisekile ukuyicebisa. Ukuba ubungandibuza ukuba kutheni, bendiya kukuxelela ukuba i-triblend tee yeyona nto ithambileyo oya kuyiphatha. Njengoko unokuthelekelela f ...Funda ngokugqithisileyo »